China ERC Enthalpy Heat Exchanger Core vagadziri uye vanotengesa | AIR-ERV
Iyo ERC yekupisa exchanger musimboti inogadzirwa neantiseptic uye antibacterial fibrous bepa, ayo akakwirira mwando kubvumidzwa, anti-rends, anti-mildew; hwaro hweABS hwakasimba, pro-nharaunda uye yakareba nguva yebasa; chivharo chevhavha chakagadzirwa nesimbi yakakosheswa ine mubato wepurasitiki.
Iyo miviri mweya hova inochengetwa yakaparadzaniswa mukati memhepo yekudzoreredza mhepo, uye inomanikidzwa kupinda mukati meE ERC kupisa exchanger musimboti, iyo tembiricha uye mwando kuchinjana kubva kune iyo fibrous bepa, kuti uwane simba uye uwane simba rekuchengetedza.
Inowanzo shandiswa yekugara yekufefetedza system, kuitira kuti uwane simba uye mwando.
1. Yakagadzirwa yakakosha fibrous bepa, ine yakanyanya mwando kukwana, yakanaka mweya-kuomarara, anti-rends, kuchembera kuramba, anti-chakuvhe.
2. ABS furemu, yakanaka, isiri nyore kuputsa, yakareba nguva yebasa, pro-nharaunda, yakanaka kusagadzikana, ita chokwadi chekusimba
uye kuomarara kwechimiro, kuderedza kuyerera kumashure.
3. Rectangular chiteshi, inonzwisisika ndiro yedaro, kushoma kwemukati brace, diki panzira-kuramba, kushomeka kwemweya kurasikirwa, yakavimbisa iyo
kunonyanyisa kupisa exchanger yakakosha nzvimbo, yakawana kusvika pakunyatsoshanda.
4. Hapana zvinofamba zvikamu, uye yakaderera yekuchengetedza mutengo.
5.Compact chimiro, diki vhoriyamu, yakakodzera pazviitiko zvakasiyana.
6. Inogona kushandisa iyo yekutsuka inonatsa kuchenesa guruva nemimwe mitumbi pamidziyo, zviri nyore kushandisa uye kugadzirisa.
Iyo ERC yekupisa exchanger musimboti ndiyo chikamu chikuru chemagetsi ekudzoreredza mweya (ERV), yemhepo mavhoriyamu anosvika 30,000 m3 / h, kusanganisira yeimba neyekutengesa mweya. Iyo yekupisa exchanger musimboti inodzora kufefetedza, kudzoreredza kupisa simba uye hunyoro munguva yechando, iyo inotonhora simba uye hunyoro muzhizha, kwete chete kunze kwesimba asi zvakare inopa mhepo nyowani yemukati.
Pashure: ERD Muchinjikwa & Counter Kuyerera Heat Exchanger
Zvadaro: ERB Counter Inoyerera Yekupisa Yekutsinhana
ERA Muchinjikwa Kuyerera Hwokuchinjana
ERD Muchinjikwa & Counter Kuyerera Heat Exchanger